जनशक्ति नहुँदा संक्रमितको उपचार प्रभावित- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
जनशक्ति नहुँदा संक्रमितको उपचार प्रभावित
प्रदेश सरकारले निर्णय नगर्दा अस्पतालको स्तरवृद्धि र सेवा विस्तार अन्योलमा
श्रावण २८, २०७८ काशीराम डाँगी
रोल्पा — जनशक्ति अभावमा रोल्पा अस्पतालमा कोभिड बिरामीको उपचार प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि पर्याप्त दरबन्दी र कर्मचारी पठाउन नसक्दा सेवा प्रभावित भएको हो ।
प्रदेश सरकार मातहतको उक्त अस्पतालमा दैनिक कोभिडका बिरामी आउने गरेका छन् । थोरै जनशक्तिका भरमा कोभिड र गैरकोभिड बिरामीको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मी बिदामा नबसी दिनरात खट्दा पनि समस्या आएको छ । अस्पतालका अनुसार सीमित जनशक्तिकै भरमा अस्पतालमा आउने र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको समेत उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अस्पतालकी निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सबु काफ्लेले प्रदेश सरकारको अस्पतालको सेवा र स्तर वृद्धिको घोषणा र कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुनौती भइरहेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले रोल्पा अस्पतालको स्तर वृद्धि र सेवा विस्तार गरिएको प्रारम्भिक कार्यक्रम र बजेट पठाएपछि हामीले त्यसै अनुसार सेवा विस्तार थाल्यौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, सेवा र स्तर वृद्धि गरिएको अन्तिम पत्र र निर्णय नआएको हुँदा थालिएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न मुस्किल भएको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री सुदर्शन बरालले दुर्गममा रहेका अस्पतालको स्तर वृद्धि गरेको र त्यसै अनुसारको जनशक्ति पठाउन कार्यक्रम अघि सारेका थिए । त्यसै अनुसार रोल्पा अस्पतालमा बजेट र केही जनशक्ति पनि प्राप्त भएको हो । तर, हाल प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तर वृद्धिबारेको पछिल्लो निर्णय र अवस्थाबारे कुनै जानकारी पठाएको छैन ।
अस्पतालकी निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. काफ्लेका अनुसार प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटअनुसार ४६ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा हाल २२ जनालाई नियुक्ति दिइसकिएको छ । ‘सेवा थपिंदै गएको छ । तर, जनशक्ति अभाव छ । कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्न झन् जनशक्ति अभाव भएको छ,’ डा. काफ्लेले भनिन् । उनका अनुसार चिकित्सकसहित अझै २४ जना कर्मचारी परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारको पहलमा यसअघि अस्पतालमा थेरापी, आँखा र ल्याबसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमध्ये केहीलाई रोल्पा नगरपालिकाले पनि प्रोत्साहन भत्ता दिंदै आएको छ । यसअघि अस्पतालमा नगरले करिब १४ लाखको ठूलो क्षमताको जेनेरेटर प्रदान गरेको थियो । अस्पतालका सूचना अधिकारी कुलबहादुर डाँगीले सेवा क्षेत्रका हिसाबले स्थानीय तहमा रहेको अस्पतालका लागि पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्ने र आर्थिक लगायतका सहयोग गर्न पदाधिकारीले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए ।
अस्पताल र नगरले सञ्चालन गरेका आइसोलेसनमा समेत अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ । नगरले अस्पतालमा खटाएका तीन जना स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता बोलाएपछि झन् समस्या देखिएको छ । तर, यसबारे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले अन्य स्वास्थ्य इकाइमा आवश्यक परेकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताए । ‘फेरि अस्पतालमा आवश्यक परेमा करारमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मी पठाउन नसकिने होइन,’ पौडेलले भने । यसअघि नगरले १० नम्बर वडामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई फिर्ता बोलाएपछि पनि विवाद भएको थियो । खासगरी अस्पताललाई प्रादेशिक घोषित गरिएपछि स्थानीय तह र अस्पताल व्यवस्थापन समितिबीच सहयोगी सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । केही वर्षअघिसम्म अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख रहने प्रावधान भएकामा प्रदेश सरकारले अध्यक्ष हुन कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र १० वर्ष सामाजिक क्षेत्रमा योगदान गरेको योग्यता हुनुपर्ने नयाँ ऐन ल्याएको छ । तर, रोल्पा अस्पतालका अध्यक्ष भने माओवादी केन्द्रका नगर प्रमुख फविन्द्र आचार्य नै छन् ।
केही स्वास्थ्यकर्मी नगरले फिर्ता गरेको बारे अस्पतालकी मेसु डा. काफ्लेले नगर प्रमुख पूर्ण केसीसँग छलफल भइरहेको बताइन् । नगर प्रमुख केसीले आवश्यक परेमा अन्य कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी पठाउन सकिने आश्वासन दिएको डा. काफ्लेले बताइन् । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आचार्यले नगरले थप सहयोग गरेमा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ ११:५४
लन्डन विश्वविद्यालयमा कुसुन्डा वक्ता
श्रावण २४, २०७८ काशीराम डाँगी
रोल्पा — कुसुन्डा भाषाकी एक्ली वक्ता कमला कुसुन्डालाई विदेश भ्रमणको निम्तो आयो । उनले राहदानी बनाइन् । नागरिकतापछि परिचय खुल्ने यो अर्को सरकारी परिचयपत्र पाउँदा उनी खुसी छन् ।
बेलायतको लन्डन विश्वविद्यालयको निम्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सेमिनारमा सहभागी हुन उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाबाट बुधबार राहदानी लिएकी हुन् । अब उनी बेलायत यात्राको पर्खाइमा छिन् । ‘अब बेलायत जान्छु र नयाँ ठाउँमा घुम्छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ हाम्रो भाषा बोलेर सुनाउँछु । मेरो भाषा फैलाउँछु ।’
रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका–९ सखीस्थित टुनिबोट गाउँमा हुर्केबढेकी कमला कुसुन्डा भाषाकी एक्ली वक्ता हुन् । टुनिबोटमा बस्दै आएका कमलाका दाजु लालबहादुर कुसुन्डा आफ्नो मातृभाषाबारे खासै जानकार छैनन् । ‘मैले बुबाआमाबाट भाषा सिकेकी हुँ,’ ४८ वर्षीया कमलाले भनिन्, ‘दाइ राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्न, त्यसैले उहाँले यो भाषा सिक्न सक्नुभएन ।’ कुसुन्डा भाषाका अध्येता उदय आलेमगरका अनुसार लन्डन विश्वविद्यालयको निम्तोमा आयोजना हुने भाषासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन वक्ताका रूपमा कमलालाई पनि लन्डन पुग्ने निम्तो छ ।
कुसुन्डा भाषाबारे अध्ययन गर्दा कमलालाई वक्ताका रूपमा त्यहाँ लैजान आलेले विश्वविद्यालयसँग समन्वय एवं प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘मैले अनुसन्धान गरेको विषय पनि कुसुन्डा भाषासम्बन्धी हो,’ आलेले भने, ‘वक्तालाई पनि एकपटक त्यहाँ लैजान सकूँ र भाषाबारे थप अध्ययन बढाउन सकूँ भनेर मैले विश्वविद्यालयसँग यो प्रस्ताव गरेको हुँ । विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिएको छ ।’ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको कुसुन्डा भाषा जोगाउन पाएकामा खुसी लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
यसअघि कुसुन्डा भाषासम्बन्धी शब्दकोशसमेत प्रकाशित गरिसकेका उनले लन्डनमा वक्ताका रूपमा कमलालाई लैजान पाउँदा कुसुन्डा भाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने दाबी गरे । आलेले मगर र थारू भाषा र संस्कृतिबारेमा अध्ययन गर्दै छन् ।
केही वर्षयता दाङस्थित लमही–६ कुलमोडमा बस्दै आएकी कमलाको बिहे भने गैरकुसुन्डासँग भएको हो । उनको बिहे खत्रीसँग भए पनि कुसुन्डा भाषा वक्ताका रूपमा कमलाले अरूलाई पनि सिकाउन लागिपरेकी छन् । केही वर्षअघि भाषा आयोगको आयोजनामा दाङमा कुसुन्डा भाषाको औपचारिक कक्षासमेत सञ्चालन गरिएको थियो । तत्कालीन भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी आफैंले आएर कुसुन्डा भाषाबारे अध्ययन र कक्षा चलाउन सक्रियता देखाएका थिए । नातामा कमलाकी दिदी पर्ने ज्ञानीमैया कुसुन्डा आफ्नो भाषाकी अग्रज वक्ता थिइन् । उनको दुई वर्षअघि ८४ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । जीवितै रहेको ज्ञानीमैयाले बेलायत जान पाउने थिइन् । उनको अवसानपछि कुसुन्डा भाषाकी सक्षम वक्तामा रूपमा अब कमला एक्ली हुन् ।
ज्ञानीमैया र कमलालाई आयोगले कुसुन्डा भाषाका स्रोत व्यक्तिका रूपमा खटाएको थियो । उनीहरू त्यस सन्दर्भमा काठमाडौंसम्म पनि पुगेका थिए । आयोगले कुसुन्डा भाषा सिकाएबापत दुवैलाई मासिक ३ हजार भाषिकवृत्ति रकम प्रदान गरेको थियो । दाङमा सञ्चालन गरिएको कुसुन्डा भाषा कक्षामा सहभागी भई भाषा सिक्न कमलाकी भाउजू बेलमतीसमेत पुगेकी थिइन् । कमलाका दाजु लालबहादुरले बोल्न नसक्ने भएकाले कमलाकै पहलमा भाउजूलाई सहभागी बनाइएको अध्येता आलेले बताए । गाउँकै पुनमगरकी छोरी बेलमतीसँग एक दशकअघि विवाह गरेका लालबहादुरकी १० वर्षकी एउटी छोरी छन् ।
रोल्पाका एक्ला कुसुन्डा लालबहादुरको परिवारका लागि सरकारले घरसमेत बनाइदिएको छ । उनलाई स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्दै आएको रुन्टिगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढाले बताए । ‘लोपोन्मुख जाति र भाषा जोगाउन हामीले सक्ने साथ सहयोग दिँदै आएका छौं,’ अध्यक्ष बुढाले भने ।
कुसुन्डा विकास समाजले देशभर कुुसुन्डाको संख्या २ सय ७३ जना रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमध्ये दाङमा ९८ र रोल्पामा ३ जना छन् । केही वर्षअघि दाङमा भाषा कक्षा चलाउँदा रोल्पा, दाङ र प्यूठानबाट २२ जना सिक्न पुगेका थिए । सिकाउनका लागि कुसुन्डा भाषालाई चार चरणमा विभाजित गरिएको थियो । पूरै ३ सय ६० घण्टा पढाइ भएकामा पहिलो चरणमा खानपान, सरसफाइ, नातागोता, घरायसी व्यवहार गर्दा बोलिने भाषा सिकाइएको थियो । दोस्रो चरणमा सामाजिक सम्बन्धसम्बन्धी र तेस्रो चरणमा पाठ्यक्रममा आधारित भाषा सिकाइ थियो भने चौथो चरणमा कुसुन्डा भाषाका शब्दावली, व्याकरणसम्बन्धी जानकारी दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
दाङको लमहीस्थित कुसुन्डा समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाका अनुसार वनमै रमाउने, खेतीपाती नगर्ने र जंगलमै डुलिहिँड्ने कुसुन्डाको पुर्ख्यौली चलन हो । वनमा रहँदा समूह बनाएर बस्ने, कन्दमूल खाने, धनुकाँडबाट सिकार खेल्ने र मागेर जिउ पाल्ने परम्परागत गतिविधि रहेको उनले बताए । ‘तर, अहिले भाषा जोगाउन आपत् छ,’ धनबहादुरले भने, ‘हाम्रो समाज वनबाट गाउँमा सरेपछि हाम्रा आनीबानीमा पनि फरकपन आएको छ ।’
अध्येता आलेका अनुसार वनमै बस्ने भएकाले कुसुन्डालाई ‘वनराजा’, ‘कुसुन्डा’, ‘वनकरिया’ लगायतका नामले चिनिन्छ । कुसुन्डाको बाक्लो बसोबास रहेको लमहीको कुलमोड छेउको वन क्षेत्र हो । त्यहाँ रोल्पा र प्यूठानबाट बसाइँ सरेका कुसुन्डा बस्छन् । कुसुन्डा समुदायलाई सहयोग गर्दै आएका लमही नगरका प्रमुख कुलबहादुर केसीले पहिले कुसुन्डा भाषा संरक्षण गर्न भाषा कक्षा चलाइएको र हाल जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्दै आएको बताए । कुसुन्डाजस्तै नगर प्रमुख केसी पनि रोल्पाबाटै बसाइँ सरेर लमही झरेका हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०९:१०